Fahamarinana amin'ny fahalalana
Mikaroka ny fahatsiarovan-tena amin'ny alàlan'ny famoahana fahalalana
MITADIAVITRA NY FAHAGALANA.
Vol. 7 No. 1 - V
Tontolo telo no manodidina, manitrika sy mizaha an'ity tontolo ara-batana ity, izay ambany indrindra, ary ny atsikaon'izy telo.
Vol. 6 DECEMBER, 1907. Tsia
IZANY lahatsoratra dia hiezaka ny hampiseho hoe inona ny saina sy ny fifandraisany amin'ny vatan'ny vatana. Hanondro ny fifandraisan'ny saina eo amin'ny tontolo ao anatiny sy momba antsika, manondro sy maneho ny tena fisian'izao tontolo izao abstract, maneho ny fomba ananan'ny saina an-tsaina ao, ary ahoana no ahatongavana amin'ny fahalalana. fahatsiarovan-tena.
Maro ny olona hilaza fa fantany fa manana vatana izy, fa manana fiainana, faniriana, fahatsapana, ary manana saina sy mampiasa izany ary mieritreritra miaraka aminy; fa raha manontany momba ny tena vatany izy, manao ny fiainany, faniriana ary fahatsapana, inona no eritreritra, inona ny sainy ary inona ny fizotran'ny asany raha mieritreritra izy, tsy hatoky ny valiny. tahaka ny maro no vonona hanamafy fa mahalala olona, ​​toerana, zavatra na lohahevitra iray, fa raha tsy maintsy milaza ny zavatra fantany momba azy ireo sy ny fomba fahalalany izy ireo, dia ho vitsy kokoa ny teniny. Raha misy olona mila manazava hoe inona izao tontolo izao amin'ny faritra misy azy ary amin'ny ankapobeny, ahoana ary no antony namokaran'ny tany ny zavamaniry sy ny biby iainany, inona no mahatonga ny onjan-dranomasina, ny rivotra, ny afo ary ny hery iasan'ny tany fandidiana, inona no mahatonga ny fizarazarana ny firazanan'ny zanak'olombelona, ​​ny fiakaran'ny fianakavian'ireo sivilizasiona, ary inona no mahatonga ny olona hieritreritra, dia miato izy, raha sambany, tsy mieritreritra ny sainy ny fanontaniana toy izany.
Tonga eo amin'izao tontolo izao ny olombelona biby; ny toe-javatra sy ny tontolo iainana dia mamaritra ny fomba fiainany. Raha mijanona ho ilay biby izy, dia afa-po amin'ny fomba mora indrindra amin'ny fomba falifaly. Raha mbola mahafa-po azy ny filany haingana dia maka izay zavatra hitany fa tsy manontany momba ny anton-javatra izy ary miaina fiainana biby sambatra. Misy fotoana ao anatin'ny fivoarany rehefa manomboka manontany tena izy. Manontany tena amin'ny tendrombohitra sy ny gadra, ny firohondrohon'ny ranomasina Izy, mahatalanjona ny afo sy ny heriny rehetra, ary mahatalanjona amin'ny tafio-drivotra, ny rivotra, ny kotrokorana, ny tselatra ary ny singa mandady. Mahita sy mahatalanjona ny amin'ny fiovan'ny vanim-potoana, ny zavamaniry maniry, ny voninkazo ny voninkazo, izy dia mahatalanjona ny kintana mirehitra, ny volana ary ny fotoana miova, ary izy dia mijery sy mahatalanjona amin'ny masoandro ary mankalaza azy amin'ny maha mpanome azy. fahazavana sy fiainana.
Ny fahaizana manontany tena dia manova azy avy amina biby mankany amin'ny olona iray, satria mahagaga fa fambara voalohany ny saina mifoha; fa tsy tokony ho gaga foana ny saina. Ny dingana faharoa dia ny fiezahana hahatakatra sy hampiasa ilay zavatra manaitra. Rehefa tonga tamin'ity sehatra ity ny fivoarana ny olombelona dia nijery ny masoandro miposaka sy ny vanim-potoana niova, ary nanamarika ny fivoaran'ny fotoana. Tamin'ny alàlan'ny fomba fijeriny dia nianatra nampiasa ny fizaran-taona araka ny fiverenan'ny fihodinan'ny rivodoza izy, ary natambatra tamin'ny ezaka nataony izy ireo mba hahafantaran'ireo olona izay, taloha kelin'ny nandalo ny sekoly izay nidirany tamin'izany. Mba hitsara marina ny tranga miverimberina amin'ny natiora, ity no antsoin'ny olona ankehitriny hoe fahalalana. Ny fahalalany dia ny zavatra sy zava-mitranga toy ny aseho sy takatra arakaraka sy amin'ny an-tsaina.
Naharitra am-potoana mba hananganana ny saina sy hananganana ireo saina ary hahazoana fahalalana ny tontolo ara-batana amin'ny alalany; kanefa ny fahazoana fahalalana an'izao tontolo izao dia tsy manam-pahalalana ny sainy, satria ny fiasa sy ny fahaizany dia voaofana tsara sy namboarina ho an'ny saina ary tsy afaka mahita izay tsy tonga na manintona ny sain-tsaina .
Amin'ny fahalalana tena izy, ny saina tsotra dia mifandraika amin'ny fifandraisan'ny olombelona biby ho amin'izao tontolo izao tamin'ny fotoanany. Ny olona dia mifoha amin'ny andro mety hiseho amin'ny tontolo anatiny raha ny olona no mifoha amin'ny olona ara-batana. Nandritra ny taonjato farany, ny sain'olombelona dia nandia tsingerina maro sy dingana fampandrosoana. Ny olona dia afa-po ny ho teraka, ny hoentina, ny hihinana, ny hihinana sy hisotro, ny raharaham-barotra, ny hanambady ary ny maty, miaraka amin'ny fanantenana any an-danitra, fa tsy mbola afa-po izao izy. Ataony izany rehetra izany tahaka ny nataony taloha ary mbola hitohy amin'ny sivilizasiona mbola ho avy, fa ny sain'olombelona dia ao anatin'ny toe-javatra mifoha amin-javatra hafa noho ny raharaham-piainan'ny zanak'olombelona. Mihetsi-po sy mikorontana ny saina noho ny korontana izay mitaky zavatra mihoatra ny fetran'ny mety ho vitany eo no ho eo. Io fangatahana io dia porofo iray fa azo atao ny manao sy tsy mahalala mihoatra noho ny efa fantany. Manontany tena ny olona hoe iza avy ary iza izy.
Mahita ny tenany amin'ny toe-javatra sasany, mitombo amin'ireto ary mianatra araka ny faniriany izy no miditra amin'ny sehatry ny asa, fa raha mitohy amin'ny sehatry ny asa izy dia mahita fa tsy hahafa-po azy ny fandraharahana na dia mahomby ihany aza izy. Mitaky fahombiazana bebe kokoa izy, azony izany, ary mbola tsy afa-po izy. Mety hitaky ny fiarahamonina sy ny vazaha izy ireo, ny fahafinaretana, ny filoham-pirenena ary ny fanatanterahana ny fiainam-piarahamonina ary mety mangataka sy hahatratra ny toerany sy ny fahefana izy, nefa mbola tsy mahafa-po. Ny fikarohana siantifika dia mahafa-po mandritra ny fotoana iray satria mamaly ny fanontanian'ny saina mikasika ny fisehoan'ny trangan-javatra sy ny lalàna sasany mifehy ny zava-mitranga. Mety hilaza ny saina fa hainy, fa rehefa mitady hahalala ny anton-javatra, dia tsy afa-po intsony. Manampy ny saina ny fisian'ireo zavakanto ao anaty natiora, fa miafara amin'ny tsy fahafaham-po ao an-tsaina izany satria ny tsara tarehy kokoa ny filana, ny kely kokoa dia azo aseho an-tsaina. Ny fivavahana dia anisan'ireo loharanom-pahalalana mahafa-po indrindra, satria na lohahevitra aza ny lohahevitra dia manambany amin'ny alàlan'ny fahatsapana, ary na dia ny solontenan'ny fivavahan'izy ireo aza dia milaza ny heviny momba ny fivavahany fa mihoatra noho ny eritreritra, dia manohitra ny fangatahan'izy ireo izy ireo izay mifangaro amin'ny alàlan'ny, sy amin'ny alàlan'ny saina. Na aiza na aiza misy azy ary na inona na inona misy azy, dia tsy afa-miala amin'ny fanadihadihana toy izany izy: Ny dikan'izany rehetra izany - ny fanaintainana, ny fahafinaretana, ny fahombiazana, ny fihavanana, ny fankahalana, ny fankahalana, ny fitiavana, ny hatezerana, ny faniriana; ny frivolities, illusion, filoka, ambiviana? Mety ho nahomby tamin'ny asa aman-draharaha, fanabeazana, toerany izy, mety hanana fianarana lehibe, fa raha manontany tena izy hoe inona no zavatra fantany avy amin'ny zavatra nianarany dia tsy mahafa-po ny valiny. Na dia mety manana fahalalana lehibe momba an'izao tontolo izao aza izy, dia fantany fa tsy fantany izay fantany tamin'ny voalohany. Amin'ny alàlan'ny fanontany tena ny dikan'izany rehetra izany dia nasehony fa afaka miditra amin'ny fanatanterahana tontolo hafa ao anatin'ny tontolo ara-batana izy. Fa ny asa dia atao sarotra amin'ny tsy fahalalany ny fanombohana. Izany dia tsy tokony ho gaga intsony satria ny fidirana amin'ny tontolo vaovao dia mitaky ny fampandrosoana ny fahaiza-manao izay ahafahan'ny tontolo vaovao takarina. Raha efa natsangana ireo fahaizana ireo dia efa fantatry izao tontolo izao fa tsy vaovao. Saingy raha vaovao ary ny fahaiza-manao ilaina amin'ny fahatsiarovan-tena ao amin'ny tontolo vaovao no hany fomba ahafantarany ny tontolo vaovao, tsy maintsy hamolavola fahaiza-manao izy. Izany dia atao amin'ny ezaka sy ny ezaka hampiasana lozisialy. Raha nianatra ny hahafantatra ny tontolo ara-batana ny saina, dia tsy maintsy izany koa, ny saina, mianatra hahalala ny vatany vatana, mamorona vatana, miaina, ary ny fitsipiny faniriana, ho fitsipika miavaka sy tsy mitovy amin'ny azy manokana. Eo am-piezahana ny hahafantatra ny maha-vatana ara-batana, ny saina dia manavaka ny tenany amin'ny vatana ara-batana ary noho izany dia mora kokoa ny hahatakatra ny firafitra sy ny firafitry ny ara-batana sy ny anjara asan'ny vatana ara-batana ary tsy maintsy ho avy amin'ny ho avy. . Raha mitohy ny fiainana, ny saina dia mianatra ireo lesona izay ampianarin'ny fanaintainana sy fahafinaretana an'izao tontolo izao amin'ny alàlan'ny vatany, ary mianatra izany dia manomboka mianatra ny hamantatra ny tenany ho ivelan'ny vatana. Saingy tsy afaka miaina aorian'ny taona maro sy ny fahanterana. Rehefa mifoha amin'ny lesona momba ny fanaintainana sy ny fifaliana sy ny alahelo, ny fahasalamana sy ny aretina ary manomboka ny mijery ao am-pony, dia tsapan'ny olona fa ity tontolo ity, tsara tarehy sy maharitra araka ny fahitana azy, dia tsy misy afa-tsy ny mafy sy mafy indrindra amin'ny tontolo maro. izay ao anatiny sy momba azy. Rehefa mahay mampiasa ny sainy izy dia mety mahatsapa sy mahatakatra ny tontolo anatiny sy manodidina an'ity vatana ity sy ara-batana, na dia eo aza ny fahaizany sy ny fahatakarana ny zavatra ara-batana izay heveriny fa fantany, fa ny tena izy dia mahalala kely fotsiny ny. Rehefa mianatra hahafantatra ny vatany sy ireo fitsipika hafa izay mahatonga azy ho izy izy, dia hianatra hahalala ny tontolo hafa satria ny tsirairay amin'ireo lafin-javatra izay miditra ao amin'ny lalàm-panorenany amin'ny maha-olombelona azy, dia manana ny tontolo mifanaraka aminy. ny fivelomana sy izay misy azy ary mivezivezy.
Misy tontolo telo izay manodidina, manitrika ary mizaha ity tontolo ara-batana antsika ity, izay ambany indrindra sy fiorenan'ny taolan'izy telo. Ity tontolo ara-batana ity dia maneho ny vokatry ny vanim-potoana lehibe toy ny fanisana ny fotoanantsika, ary maneho ny vokatry ny fanerena ny tontolo tranainy amin'ny raharaha eterialika feno habe samihafa. Ireo singa sy hery izay miasa ankehitriny amin'ity tontolo ity dia solontenan'ny tontolo tany am-boalohany.
Ireo tontolo telo izay nialoha antsika dia mbola miaraka amintsika ary fantatry ny fahiny fa afo, rivotra sy rano, fa ny rivotra, rano, ary koa ny tany, tsy ireo izay fantatsika amin'ny fampiasana mahazatra ireo teny. Izy ireo no singa goavambe izay ny fototr'io raharaha izay fantatsika amin'ireo teny ireo.
Mba ho mora kokoa ny fahatakarana an'izao tontolo izao Figure 30. Izy io dia maneho ny tontolo efatra izay tsy maintsy iresahantsika, amin'ny lafiny tsy fandraisana andraikitra sy ny fivoarana, ary izy koa dia mampiseho ny lafiny efatra na ny fitsipiky ny olombelona, ​​samy mihetsika ao amin'ny tontolony, ary miasa amin'ny lafiny ara-batana.
Amin'ireo efatra dia izao sy izao tontolo izao voalohany sy ambony indrindra, ny singa goavambe izay afo, dia tsy mbola naminavina ny siansa maoderina, ny antony hisehoana izany. Ity tontolo voalohany ity dia tontolon'ny singa iray izay afo, saingy mirakitra ny fahafahan'ny zava-drehetra izay niseho taorian'izay. Ny singa iray amin'ny afo dia tsy ilay foibe laya izay mamela ny fandalovana ny hita any amin'ny tsy hita maso, ary ny fitaterana izay antsointsika hoe afo, nefa dia, ary mbola misy izany, tontolo iray izay tsy takatry ny saintsika na ny endriny. . Ny toetra mampiavaka azy dia fofonaina ary asehon'ny homamiadana famantarana (♋︎) ao Figure 30. Ny fofonaina dia mitaky ny mety hisian'ny zava-drehetra ary antsoina hoe antsoina hoe afo satria ny afo no hery mihetsika ao amin'ny vatana rehetra. Saingy ny afo resahintsika dia tsy ny lelafo mandoro na manazava ny tontolontsika.
Mandritra ny tsy fandraisana andraikitra, ny afo, na ny fofonaina, dia mitroka ao anatiny, ary nantsoina ho fisian'izao tontolo izao, izay nasehon'ny famantarana leo (♌︎), fiainana, ny singa goavambe izay ny rivotra. Teo ny tontolo iainana, ny singa izay misy ny rivotra, izay voahodidin'ny rivotra sy ny fofon'aina, ny singa izay afo. Ny tontolon'ny fiainana dia naminavina ary ny teôlôjia dia natsangan'ny siansa maoderina, na dia ireo teoria aza momba ny fiainana tsy nahafa-po ny teolojia. Azo inoana anefa fa marina ny marina amin'ireo fanombantombanana ireo. Ny fahazahoana, izay homogeneous, amin'ny fofonaina, dia maneho ny tsy fitoviana eo amin'ny tontolon'ny fiainana, ary io fisehoana io dia resaka ara-panahy. Ny resaka ara-panahy dia singa mifono rivotra amin'ny tontolon'ny fiainana, leo (♌︎); izany no nifandraisan'ny mpahay siansa ny fanombatombanan'izy ireo sy ny nantsoin'izy ireo fa ny olan'ny atomika. Ny famaritana siantifika momba ny atody iray dia: ny ampahany kely indrindra tsy azo sarahina izay afaka miditra amin'ny fananganana molekiola na mandray anjara amin'ny fanehoan-kevitra simika, izany hoe singa tsy azo zaraina. Io famaritana io dia hamaly ny fisehoan-javatra eo amin'ny tontolon'ny fiainana (♌︎), izay nantsointsika hoe raharaha ara-panahy. Izy io, ara-panahy, atody, singa tsy hita lany, dia tsy iharan'ny fizahana ny saina ara-batana, na dia mety ho tsapa amin'ny alalàn'ny olona mahatsapa fisainana aza, satria ny eritreritra (♐︎) dia mifanohitra amin'ny lafiny evolisiona. ny fiaramanidina izay zava-panahy, fiainana (♌︎), no lafiny tsy fandraisana andraikitra, fisainana mandinika (♌︎-♐︎), ho hita eo amin'ny Figure 30. Tamin'ny fivoaran'ny fanandramana sy ny fanandramana ara-tsiansa taty aoriana, dia noheverina fa tsy voazarazara daholo ny atody iray, satria mety ho zaraina ho faritra maro izany, ka ny ampahany tsirairay dia azo zaraina indray; fa izany rehetra izany ihany no manaporofo fa ny foto-kevitr'izy ireo sy ny teoria dia tsy atody, fa ny zavatra lehibe kokoa noho ny tena atom, izay tsy azo tsinontsinoavina. Io no olana ara-panahy ataoma atomika izay lohahevitra momba ny tontolon'ny fiainana, ny singa izay ilay singa goavambe fantatry ny taloha fa rivotra.
Rehefa nandeha ny fihodinanan'ny tsy fandraisana andraikitra dia nihanalefaka sy nanakorontanana ny olan'ny zavamananaina sy ny atom-piainana ny tontolon'ny fiainana, leo (♌︎), ary ireo fehezanteny sy crystallizations ireo ankehitriny dia lazaina fa astral. Io astral io no tontolon'ny endriny, nasehon'ny endrika virgo (♍︎). Ny endri-javatra, na ny tontolon'ny astral dia ahitana ny endrik'ilay abstract misy, ao ary ao no ametrahana ny tontolo ara-batana. Ny singa amin'ny tontolon'ny endrika dia rano fa tsy ny rano izay fitambaran'ireo singa roa ara-batana izay antsoina hoe fizika. Ity tontolon'ny astraly na endri-piainana ity, dia izao tontolo izao izay diso nataon'ny mpahay siansa ho an'ny tontolon'ny fiainana atomika. Izy io, ny tontolon'ny fanjakan'ny astral, dia ahitana zavatra molekiola ary tsy hita maso, izay mora vovoka amin'ny herin'ny vatana fotsiny; ao anaty izy, ary mitazona ny endriny rehetra izay, amin'ny maha-izy azy.
Ary farany dia manana ny tontolontsika ara-batana izay nasehon'ny sign libra (♎︎). Ny singa goavan'ny tontolo iainantsika dia fantatry ny fahagola toy ny tany; tsy ny tany fantatsika fa ny tany tsy hita maso, izay mitazona ny tontolon'ny endrika astral, ary izany no antony mahatonga ny fijanonan'ny singa manandanja sy ny fisehoany ho tany hita maso. Araka izany, ao amin'ny tany ara-batana hita maso, isika dia, voalohany ny tany astral (♎︎), ary avy eo ny endrika astral (♍︎), avy eo ireo singa izay itambaran'izy ireo, dia ny fiainana (♌︎), ny fonony roa, ary ny fofonaina. (♋︎), izay an'ny tontolon'ny afo ary manohana sy mihazona ny zava-drehetra tsy mihetsika.
Ao amin'ny tontolo iainantsika dia mameno ny hery sy ny singa amin'ny tontolo efatra, ary anjarantsika manokana ny miditra amin'ny fahalalana sy ny fampiasana ireo raha te hanao izany isika. Ny tenany ihany, ny tontolo ara-batana dia akorandriaka, alokaloka tsy misy loko, raha hita na tsikaritra ao anatiny, satria hita taorian'ny alahelo sy ny alahelo sy ny alahelo ary ny fahafoanana, dia nanaisotra ny fihan'ny tsindry ary manery ny saina hahita ny faharetan'izao tontolo izao. Tonga izany rehefa nitady sy nanala ny mpanohitra azy ny saina. Lasa ireto, ary tsy misy na inona na inona hitranga, very ny loko sy ny hatsarana rehetra izao tontolo izao ary tonga maizina be.
Rehefa tonga ao an-tsaina ny toe-tsaina, izay nanjavona ny loko rehetra ary toa tsy misy antony hafa afa-tsy mamorona fahantrana ny fiainana, tsy ho ela dia hisy ny fahafatesana raha tsy misy ny fisehoan-javatra iray izay hampody ny saina ho azy na hamoha azy. mahatsapa fihetseham-po hafa, na mba hampisehoana izany tanjona izany amin'ny fijaliana. Rehefa mitranga izany dia miova ny fiainana noho ny fahazarana taloha ary araka ny hazavana vaovao tonga teo aminy dia mandika an'izao tontolo izao sy ny tenany. Avy eo, izay tsy misy loko dia mitaky loko vaovao ary manomboka indray ny fiainana. Ny zava-drehetra sy ny zava-drehetra eto amin'izao tontolo izao dia misy dikany hafa noho ny taloha. Misy fahafenoana tanteraka izay toa tsy nisy na inona na inona taloha. Toa mbola manana fanantenana sy idealy vaovao ny ho avy izay mitondra mankany amin'ny eritreritra sy tanjony vaovao sy ambony kokoa.
In Figure 30, ireo tontolo telo dia aseho miaraka amin'ny lehilahy ao aminy izay mijoro amin'ny fahefatra sy ambany indrindra, vatana ara-batana, ao amin'ny sign libra (♎︎). Ny lehilahy libra ara-batana, firaisana ara-nofo dia voafetra ho amin'ny tontolon'ny virgo-scorpio (♍︎-♏︎), fanirian'ny endrika. Rehefa mieritreritra ny tenany ho vatana ara-batana sy saina ihany ny saina, dia manandrana mampifandray ny tontolon'ny olombelona samihafa ao anaty vatana ara-batana izy io ary mihetsika amin'ny alàlan'ny fahatsapana, izany no fahitan'ny vatany izay mitondra mankany amin'ny vatana izao tontolo izao; ka mifandraika amin'ny fahaizany ara-batana fotsiny ny fahaizany sy ny fahafaha-manao azy, ary avy eo dia aparitaka ny hazavana avy amin'ny tontolo avo kokoa. Ny toetry ny olombelona, ​​noho izany, dia tsy misy, izay tsy maha-zavatra hafa noho ny fiainany ara-batana eto amin'ity tontolo ara-batana ity. Tokony ho tsaroana tsara fa tratry ny fotoana nahalasa niditra an'izao tontolo izao ara-batana sy ny firaisana ara-nofo, libra (♎︎), izay avy amin'ny fofonaina, na tontolon'ny afo, nateraky ny homamiadana famantarana (♋︎). ny fofon'aina, tsy misitraka ary miorina amin'ny mariky ny leo (♌︎), ny fiainana, ny fitrandrahana sy ny lamaody amin'ny famantarana virgo (♍︎), ny endrika, ary teraka tao amin'ny sign libra (♎︎), firaisana ara-nofo.
Ny tontolon'ny fofonaina dia ilay fiandohan'ny fampiroboroboana ny saina ao amin'ny zodiaka tanteraka; izany no fanombohan'ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny fitrandrahana avo indrindra, ilay olona ara-panahy, izay nanomboka tamin'ny zodiak'ilay olona ara-panahy tamin'ny aries (♈︎), nidina tamin'ny alàlan'ny taurus (♉︎) ary gemini (♊︎) tamin'ny homamiadana famantarana ( ♋︎), ny zodiaka ara-panahy, izay eo amin'ny sainan'ny famantarana leo (♌︎) momba ny zodiak tena. Io famantarana io (♌︎), fiainana, amin'ny zodiakma tanteraka dia ny homamiadana (♋︎), fofonaina, ny zodiaka ara-panahy, ary izy no fiandohan'ny tsy fandraisana andraikitra amin'ny zodiaka ara-tsaina; izany dia manomboka amin'ny famantarana aries (♈︎), ao amin'ny zodiaka ara-tsaina, dia tafiditra amin'ny alàlan'ny taurus (♉︎) amin'ny homamiadana (♋︎) ny zodiak ara-tsaina, dia ny fiainana, leo (♌︎), ny zodiaka ara-panahy, ary avy eo midina mankany amin'ny sign leo (♌︎), momba ny zodiaka ara-tsaina, izay eo an-tokotanin'ny virgo (♍︎), endrika, amin'ny zodiac tanteraka, amin'ny fiaramanidin'ny homamiadana (♋︎), ny zodiaka ara-tsaina, ary ny fetran'ny zodiak ara-batana araka ny marika aries (♈︎), an'ny lehilahy ara-batana sy ny zodiakony.
Taloha taloha kelin'ny tantaran'ny zanak'olombelona, ​​tonga saina ny fon'ny olombelona tonga nofo, vonona ny handray izany; mbola voamarika ihany io famantarana io, sehatra, ambaratonga fandrosoana sy fahaterahana, ka io dia mitohy hatrany hatrany ao anatin'izao vanim-potoana iainantsika izao. Amin'izao fotoana izao dia sarotra ny manaraka ny fitarainana tafiditra ao amin'ny lehilahy ara-batana, saingy mbola nitohy ny eritreritr'ireo lehilahy efatra sy ny zodiakony tao anatin'ny zodiak tena izy, araka ny aseho ao amin'ny Figure 30, dia hanambara ny ankamaroan'ny fahamarinana naseho tao amin'ilay tarehimarika.
Ny fivoaran'ny fisainan'ny olona sy ny vatana taloha izay tafiditra ao amin'ny vatany, dia avy amin'ny vatana, avy amin'ny libra (♎︎), firaisana ara-nofo, ny vatana ara-batana. Nivoitra ny fivoarana, voalohany noho ny faniriana, araka ny mariky ny scorpio (♏︎), ny faniriana, ny zodiac tanteraka. Ho hita fa io famantarana io scorpio (♏︎) amin'ny zodiaka tanteraka, dia famenoana sy eo amin'ny lafiny mifanohitra amin'ny famantarana virgo (♍︎). Ity fiaramanidina ity, virgo-scorpio (♍︎ – ♏︎), avy amin'ny zodiaka tanteraka, mandalo ny satro-piainana, leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), ny zodiac ara-tsaina, izay ny fiaramanidina homamiadana-capricorn, fofonaina maha-olona (♋︎ – ♑︎), ny zodiac ara-tsaina, izay no fetra sy fetra an'ny olona maha-vatana sy ny zodiakony. Azo atao àry izany, noho ny fidiran'ny vatana ara-batana misy vatana, ny singa ary ny herin'izy ireo amin'ny tontolo samy hafa, mba hananan'ny lehilahy ara-batana ho vatana ara-batana; ny antony mety hieritreretany sy hiheverany ny tenany ho fisainana ara-batana misaina dia noho ny fihavian'ny lohany ny fiaramanidina leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), ny fisainana-fiainana, ny zodiac ara-tsaina, ary koa ny fiaramanidina. homamiadana-capricorn (♋︎ – ♑︎), fitaizan'ny fofonaina, ny zodiak-tsaina; fa izany rehetra izany dia voafetra amin'ny fiaramanidina endrika-faniriana, virgo-scorpio (♍︎ – ♏︎), amin'ny zodiak tena. Noho ny fahaizany ara-tsaina, noho izany, ny olombelona ara-batana dia afaka miaina ao amin'ny famantarana scorpio (♏︎), maniry sy hahatsapa izao tontolo izao sy ny endrik'izao tontolo izao, ny haben'ny virgo (♍︎), fa miaina mandritra izany sonia sy famerana ny tenany amin'ny eritreritry ny leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), ny tontolon'ny saina, na ny zodiac, tsy afaka mahita afa-tsy ireo endrika ara-batana sy ny fiainana ary ny fisainan'ny tontolony ara-tsaina toy ny asehon'ny fofonaina sy maha-olona toetoetran'ny saina, amin'ny vatany amin'ny libra (♎︎). Io ilay lehilahy biby nolazainay.
Ankehitriny, raha ilay lehilahy henjana biby, na amin'ny fiainana voalohany, na amin'ny fiainana sivily, dia manomboka manontany tena ny zava-miafina ny fiainana ary maminavina ny mety ho antony mahatonga ny zava-mitranga izay hitany, dia nopotehiny ny akorany. ny zodiaka sy izao tontolo izao ary nanitatra ny sainy hatrizay mankany amin'ny tontolo ara-tsaina; dia manomboka ny fampandrosoana ny olon-tsainy. Hita izany amin'ny famantarana ataontsika. Nomarihin'ireo aries (♈︎) ilay lehilahy ara-batana ao amin'ny zodiakony, izay eo amin'ny sailidin'ny homamiadana-capricorn (♋︎ – ♑︎) ny lehilahy ara-tsaina sy ny leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), ao an-tsaina. ilay lehilahy manahy. Mihetsika avy amin'ny famantarana capricorn (♑︎), izay mamaritra ny fetran'ny olombelona ara-batana, miakatra ambony ao amin'ny zodiak ao amin'ny tontolo ara-tsaina izy ary mandalo ny fizarana sy famantarana ny aquarius (♒︎), fanahy, pisces (♓︎), dia, amin'ny aries (♈︎), fahatsiarovan-tena, ao amin'ny lehilahy ara-tsaina, izay eo amin'ny sailidin'ny kansera-capricorn (♋︎ – ♑︎), fitaizan'ny fofon'aina, ilay lehilahy ara-tsaina sy leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), mieritreritra ny fiainana. amin'ny zodiaka ara-panahy. Noho izany, ny olona ara-tsaina dia mety hivoatra ao anatiny sy momba ny vatana ara-batana ary mety, amin'ny alàlan'ny eritreriny sy ny zavatra nataony, no manome ilay fitaovana ary mametraka ny teti-pivoarana ho an'ny fivoarany, izay manomboka amin'ny famantarana capricorn (♑︎) momba ny zodiaka ara-tsaina ary manitatra. miakatra miakatra amin'ny alàlan'ny famantarana aquarius, fanahy, pisces, will, to aries (♈︎), an'ny olona marary ara-tsaina sy ny zodiakony. Izy izao dia eo amin'ny fiaramanidina homamiadana-capricorn (♋︎ – ♑︎), miaina-miaina, ny zodiak ara-panahy, ary koa ilay fiaramanidina leo-sagittary (♌︎ – ♐︎), izay eritreretin'ny fiainana, ilay zodiak tena.
Azo atao tokoa ny iray, rehefa mamolavola ny sainy ho any amin'ny zodiac ara-tsaina izy, dia mahita ny fiainana sy ny eritreritr'izao tontolo izao. Io no fetra sy fetra ananan'ny manam-tsiansa. Mety hitsangana amin'ny alàlan'ny fivoarany ara-tsaina ho an'ny fiaramanidina eritreritr'izao tontolo izao izy, izay maha-olombelona ny toe-tsaina, ka maminavina ny fofonaina sy ny ain'ny fiaramanidina iray ihany. Raha toa ka tsy tokony hametra ny tenany amin'ny eritreriny loatra ilay lehilahy ara-tsaina, fa tokony hiezaka ny hiakatra eo ambonin'io, hanomboka amin'ny fetran'ny fiaramanidina izy ary hanao sonia izay iasanany, izany no capricorn (♑︎ ) ny zodiac ara-panahiny, ary miakatra amin'ny alàlan'ny famantarana aquarius (♒︎), fanahy, pisces (♓︎), ho lasa aries (♈︎), fahatsiarovan-tena, izay fampandrosoana feno ny olona ara-panahy ao amin'ny zodiaka ara-panahy, izay miitatra ary voafatotry ny fiaramanidina-capricorn (♋︎ – ♑︎) ny fofonaina, ny zodiac tanteraka. Izany ny haavon'ny tratra sy ny fivelaran'ny saina amin'ny alàlan'ny vatana ara-batana. Rehefa tratra izany, ny tsy fahafatesan'ny tsirairay dia zava-misy sy zava-misy marina; tsy ho faty na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana na oviana, na inona na inona toe-javatra na toe-javatra misy, dia tsy hijanona tsy ho tonga saina hatrany foana ny saina, izay nahatratra izany.
Tao amin'ny tonian-dahatsoratra farany momba ny "torimaso", dia natao an-tsokosoko ireo teny hoe "hozatra sy ny hozatra". Ny hozatra miasa mandritra ny fifohazana sy ny torimaso dia mitovy, fa mandritra ny torimaso dia miteraka ny fihetseham-po amin'ny vatana ny fototry ny rafitry ny rafi-pitolomana, raha amin'ny fotoana fohazana dia manondrika ny tsimokaretina tsimok'aretina. . Ity hevitra ity dia mitazona tsara amin'ny alàlan'ny «Torimaso».